FARITANY MAHAJANGA : Hivoaka ny sabotsy sy alahady izao ny valim-panadinana BEPC
Efa nivoaka ny valim-panadinana BEPC ho an’i Soalala sy Maintirano. Araka ny vaovao azo dia manodidina ny 30% eo ny taham-pahafahana tany Soalala ary mihoatra kely ny 40% ny an’i Maintirano. 14 juillet 2017
Anio kosa no andrasana ny valim-panadinana ho an’ny fari-piadidiam-pampianarana Ambatoboeny sy Marovoay. Ny sabotsy no heverina fa hivoaka ny an’i Mahajanga faharoa ary alahady farafahatarany hivoaka ny valim-panadinana eto Mahajanga voalohany.
Efa miezaka manao ny hamoahana azy ireo araka izay azo atao ny tompon’andraikitra isan-tokony ary ny alahady izao no fe-potoana farany ahazoana ny valim-panadinana rehetra. Manomboka ny alatsinainy izany dia efa hilamin-tsaina avokoa ireo nanao fanadinana na afaka na tsia ka afaka hiala sasatra am-pitoniana.